apple yakabhadharisa $ 2m nekusasanganisira charger ne iphone 12
Kuru Nhau & Ongororo Apple yakabhadharisa madhora mazana maviri emadhora nekusabatanidza charger ne iPhone 12
Apple yakabhadharisa madhora mazana maviri emadhora nekusabatanidza charger ne iPhone 12
Maitiro eApple Akamutswa Sei
Apple achangobva kubhadhariswa faindi mamirioni maviri emadhora neProcon-SP, Brazil & apos; s sangano rekuchengetedza vatengi, rekutadza kutevedzera mitemo yemuno kubvira kuburitswa kweiyo iPhone 12.
Chimwe chezvikonzero chakagashira Apple chirango ichi kuramba kwayo kuisa maadapter emagetsi pamwe neiyo iPhone 12 dzakateedzana . Apple yakasarudza kuita izvi zvakatemwa pasi rose muchirevo chekuti kudzora maadapter (uye maEarPods, pachinhu ichocho) kwaizoponesa Pasi kubva pamamirioni matatu metric matani emhepo kabhoni gore rega.
Iyo yakanaka haina & apos; haina kuuya pasina yambiro. Bhuraziri yambiro Apple kumashure muna Zvita kuti yaityora Consumer Defence Code nekusasanganisira maadapter nemaPhones, akawedzeredzwa nekutadza kujekesa chokwadi ichi mukushambadzira kwavo. Apple haina kubvira yambotaura chero chinhu munzira yekudzikisa mitengo yavo kubhadhara kushomeka kweshaja inosanganisirwa, chero. MuBrazil, iyo iPhone 12 Pro Max inodhura zvakaenzana yeUS $ 2,535, nepo ichitanga pamadhora mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe muUnited States uye inokwana kuita $ 1,399.
Rini Procon-SP akabvunza Apple kana yaive zvechokwadi inobhadharisa neyepasi unit mutengo, haina kuita mhinduro. Izvo zvaingodzokororazve iyo kabhoni kuburitsa mari yekuchengetedza mutsara, ichiwedzera kuti vazhinji vashandisi vatova nemachaja ekuchengetedza kubva kumaPhones apfuura.
Ko Apple Inotarisira Nezve Zvakatipoteredza Here?
Hazvipindirane kutengesa chishandiso chisina kuperekedzwa nechaja, pasina kuongorora kukosha kwechigadzirwa uye pasina kuratidza chirongwa chekutora zvigadzirwa zvekare, marara nezvimwe. Iwo majaja anofanirwa kupihwa kune vatengi vanoaodha. —Procon-SP
Kutungamira kusvika pakubhadhara mwedzi uno, Procon-SP yawana iyo Apple & apos; s kabhoni inoburitsa mari yekuchengetedza mari haitsigirwe zvakakwana nezvakanaka, asi inoita kunge ingori nzira yekuchengetedza-mari kukambani. Apple yakanga isati yamboedza kupa nzira dzekushandisazve nharaunda, akadaro Procon, achidana Apple & apos; s bluff. Vakabvunza Apple kuti vape chirongwa chinogoneka chekushandisa zvakare kuti vadzivise faindi yekutyora mutemo kwevatengi, asi Apple haina kumbopindura.
Kana ichikundikana kutengesa chigadzirwa chisina charger, ichiti kudzikiswa kwekabhoni uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kambani inofanirwa kupa chirongwa chekugadzirisa zvinhu. Procon-SP inoda Apple kuti ipe chirongwa chinoshanda.
Apple inoruramisa sarudzo yavo nechikumbiro chekuti kune anopfuura mabhiriyoni maviri maapirita akagadzirwa kare, uye kuti vanhu vazhinji vane zvavo zvavanogona kushandisa. Dambudziko neizvi riri pachena pachena: iPhone 12 mamodheru anotumirwa aine USB-C-kune-Mheni tambo. Iyi tambo nyowani haizokwana akajairwa 5-Watt adapters ayo varidzi veiyo iPhone 11 modhi kana pakutanga vatove nayo. Nepo mukuru Mheni-ku-USB-A majaja anotora nguva yakareba kukwirisa mudziyo wako (iyo iPhone 11 yakatora anopfuura maawa matatu uchishandisa yakajairwa), iyo itsva USB-C 20W adapter inotora pasi peawa maviri chete kuchaja iyo iPhone 12 kusvika 100 %.
Pane Chero Munhu Anochengetedza Chero Chinhu-Kunze Apple?
Let & apos; s titarise mamwe ma analytics kubva kuUnited States. Chekutanga pane zvese, iyo yega yapfuura iPhone yakauya ne USB-C-inoenderana adapta yaive iyo iPhone 11 Pro uye Pro Max. Ese mamodheru apfuura aive neakajairwa USB-A madziro plug.
Maererano ne chirevo neCIRP , muU.S, huwandu hwevashandisi ve iPhone 11 hwaipfuura zvakapetwa kaviri nhamba ye11 Pro uye 11 Pro Max vashandisikusanganiswagore rapera. Chirevo chinoratidza zvakare kuti 65% yevaridzi ve iPhone vaive ne11-yakateedzana modhi. Kunyangwe tisingatarise kuti mamwe maadapter avo akatyoka kana kurasikirwa, tinoziva kuti varidzi veiyo 11 Pro kana Pro Max vanokomberedza 30% kana zvishoma. Zvinoreva kuti ruzhinji rwevaya vari kukwidziridzira kune iPhone 12 vachabuda munzira yavo kushandisa tambo ye-USB-C inokurumidza-kuchaja ine adapta inoenderana.
Iyo & apos; s inoseka kufunga chero munhu anoda kupururudza pazvazvino uye zvakanyanya neiyo iPhone 12 anoongorora ayo ekukurumidza-kuchaja kugona. Apple zvirokwazvo inotarisira kuti vamedze kusagadzikana uye vatenge adapta nyowani muhomwe. Apple & apos; s zvinopihwa tanga pa19 $ ye20-Watt plug pawebhusaiti yavo, asi kwete munhu wese anoda kuburitsa madhora makumi maviri eadapter, uye anogona kusarudza imwe isingadhuri pane. Iko & apos; s uko zvinhu zvinogona kukanganisika, sekusarudzika zvakasarudzika kugogodza-kure, izvo zvisingakwanise kupa yakatsiga uye inowirirana yazvino gadget yako zvainoda, inogona kukanganisa nyore nyore inodhura iPhone.
Vanhu vazhinji varikuitawo nharo dzekuti Apple & apos; kutadza kuisa maadapter kuri kukuvadza vatengi vanobva munyika dzichiri kusimukira zvakanyanya, nekuti ivo vangatomboita mukana wekugona kutenga yekutanga MFi-yakasimbiswa plug.
Paive Neimwe Mhirizhonga kuseri kwezvakanaka
Iyo $ 2M chirango kubva kuBrazil haina & apos; haingouyi chete nekuda kwekushaikwa kwemagetsi. Apple yave ichipomerwa kushambadzira kwenhema, iOS yekuvandudza nyaya, uye zvisina kunaka mazwi zvakare.
Procon-SP yakapa Apple mhosva yekushambadzira kushambadza nekuti kubvira nhetembo gumi nenhatu, varidzi ve iPhone varambidzwa mabasa ekugadzirisa mafoni ane kukuvara kwemvura-kunyangwe hazvo kwemakore, maPhones anga achishambadza nhanho dzakasiyana dzemvura isinga pinde mvura kana kugona kuramba Iyo iPhone 12 yakateedzana, semuenzaniso, ine IP68 chiyero, uye yakaedzwa kuti ipone kunyudza kusvika pamamita matanhatu emvura kwemaminitsi makumi matatu. Asi Apple yanga ichiramba vatengi veBrazil kugadzirisa mabasa emafoni akakuvara nemvura kunyangwe ivo vachiri pasi pewarandi, zvinoita kunge zvinopesana nezvavanotaura.
Imwe nyaya ndeyekuti vatengi vanga vaine 'matambudziko nemamwe mabasa' pane maPhones avo zvichitevera kugadziridzwa, asi vakagamuchira zero rubatsiro kubva kuApple - zvichikonzera kufungidzirwa kwekugara kwakarongwa.
Chimwe chibvumirano chakagashira Apple muripo we $ 2M ndiwo mutemo wayo 'wekuzvisunungura kubva kuzvivimbiso zvese zviri pamutemo uye nekukanganisa kwakavanzika kana kusaoneka,' anodaro Procon-SP.
Kunyangwe isiri chakavanzika kuti iyi faindi ishanduko muhomwe yeApple, zvinogona kunge zviri zvakanaka kune ramangwana rayo kana ikabhadhara zvishoma kune mitemo yemuno yekudzivirira vatengi, uye inofunga zvikonzero zvavanenge varipo pakutanga. Kutaurirana kweApple & apos munyaya iyi kunoratidzika kunge kwaishayikwa zvinosuwisa, seBrazil isina kumbonzwa kubva kwavari maererano nenyaya zhinji dzakaunzwa (kunyangwe Apple ichiri kukwidza faindi mudare).
maitiro ekutsikisa pa s10e
OnePlus 9 Pro vs OnePlus 8 Pro vs OnePlus 7 Pro: Kamera shanduko yekuenzanisa
Akanakisa smartwatches muna 2021
Yakanakisa nyaya-inotyairwa mitambo yemitambo yeApple uye iOS
Nhare dzakanakisa dziri pasi pe $ 400
Unganidza $ 18,000 yekuva wekutanga kudzura iyo Samsung Galaxy S5 paVerizon uye AT&T
Akanakisa emamera kamera akaenzaniswa: Google Pixel XL vs iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 kumucheto, LG V20
Akanakisa epanze ekunze ekuchengetedza makamera (2018)